CES 2018: Mihaona amin'ireo famantaranandro vaovao amin'ny Android Wear | Androidsis
CES 2018 dia hetsika iray izay feno vaovao amin'ny lafiny rehetra. Koa satria ireo marika lehibe eny an-tsena dia manararaotra an'io fotoana io amin'ny fampisehoana ireo vokatra vaovao. Android dia tsy isalasalana fa iray amin'ireo protagonista lehibe, hatramin'ny smartphone maro no tonga. Saingy, izao rehetra izao Android dia tsy an'ny telefaona fotsiny. Tonga ny fotoana Android Wear.
Ny famantaranandro marani-tsaina dia mitohy mahazo vahana eo amin'ny tsena. Maromaro ny marika marobe mandefa famataran'ity karazana ity. Ankehitriny dia anjaran'ny famantaranandro Android Wear, izay amin'ity indray mitoraka ity dia tsy avy amin'ny marika toa ny Samsung na LG. Avy amin'ireo ny maherifo marika toa an'i Kate Spade sy Skagen.
Ireo marika roa ireo dia nanolotra ny azy ireo smartwatches Android Wear vaovao ao amin'ny CES 2018. Tsy marika roa fantatry ny besinimaro izy ireo. Skagen dia orinasa Danoa izay manao famantaranandro ara-dalàna ary efa nandefa vokatra elektronika toy ny famantaranandro marani-tsaina nandritra ny fotoana kelikely. raha Kate Spade dia marika akanjo sy kojakoja amerikana, izay efa manomboka amin'ny famataranandro koa izao.
1 Kate Spade Scallop
2 Skagen Falster
Ity maodelin'ny marika ity dia porofo tsara fa tsy tokony ho lehibe na matevina ny smartwatch. Ny orinasa dia manolo-tena amin'ny famolavolana tena kanto ho an'ny vehivavy izay misy loko isan-karazany. Noho izany dia napetrak'izy ireo tamin'ny fampiharana an'io Scallop io ny fahalalany ny famolavolana fitaovana.
Ny Kate Spade Scallop dia manana efijery AMOLED 1,9-inch miaraka amin'ny vahaolana 390 x 390 teboka. Ary koa, misy bokotra ara-batana amin'ny lafiny ankavanan'ny raharaha. Ao anatin'ny famantaranandro dia miandry antsika ny processeur Satroka Snapdragon 2100. toy ny ny rafitra miasa dia manana Android Wear 2.0, izany ilay kinova izay nahavoa ny magazay nandritra ny volana febroary.
Ny fiambenana dia hanana fampiharana efa napetraka mialoha antsoina hoe «safidio ny fijerinao». Misaotra an'io fa afaka mamorona sehatra manokana ianao arakaraka ny lokon'ny akanjo na amin'ny antoandro. Ity famantaranandro ity dia antenaina fa hahatratra ny tsena amin'ny a vidin'ny $ 295 amin'ny endriny misy takela-bolamena sy fehy vita amin'ny hoditra. Ny kinova volamena misy metaly dia hanana a vidin'ny $ 325.
Ny famantaranandron'ny orinasa Danoa dia fantatra amin'ny endriny minimalista, madio sy tsy misy pitsony. Zavatra tadiavin'ilay marika amin'ity famantaranandro ity amin'ny Android Wear. Amin'ny anaran'ny Falster, ity famantaranandro ity dia natolotra tamin'ity CES 2018. Izy io dia mitazona ny fomban'ny orinasa, miloka amin'ny endrika kely indrindra. Ny boaty dia vita amin'ny aliminioma ary manana habe 42 milimetatra. Hiditra loko telo samy hafa: Volamena, mainty sy volafotsy.
Amin'ny ambaratonga voafaritra dia tsy betsaka ny zavatra nambara momba ny famantaranandro. Saingy toa tsy dia misy fahasamihafana loatra amin'ny fitaovana teo aloha. Amin'ity tranga ity dia manana processeur Snapdragon Wear 2100 ao anatiny izy. Na dia mbola tsy nambara aza hoe iza amin'ny Android Wear no manana ny rafitra fiasa. Ary koa, toa izany tsy hanana antsipiriany toy ny GPS, NFC na mpamaky fitepon'ny fo izany.
Skagen dia mitady amin'ity famantaranandro ity mba hanana ny asan'ny smartwatch sasany, saingy tadidin'ny mpampiasa ihany koa izany fitaovana lamaody io. Noho izany dia mahatratra ampahany miavaka amin'ny tsena izy io. Zavatra mety hahatonga anao tsy hanana varotra ambony loatra.
Mikasika ny vidin'ity maodely ity dia misy vidiny samihafa miankina amin'ny kinova tianao hovidiana. Ny kinova an'ity Falster ity miaraka amina mailaka mainty sy mailaka dia mitentina 299 euro. Na dia somary lafo kokoa aza ireo kinova misy ny dialy volamena sy volafotsy misy ny tadin'i Milanese. Amin'ity tranga ity dia manana a vidin'ny 329 euros. Amin'izao fotoana izao dia tsy fantatra ny fotoana hamelezany ny tsena.
Mampiseho ireo famantaranandro ireo fa malalaka izao rehetra izao Android Wear ary misy famantaranandro tsy mahazatra ary miloka amin'ny endrika hafa sy ny masontsivana izy ireo. Ka hahaliana ny mahita ny fomba fivarotany mandritra ny taona 2018.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » SmartWatch » Ireo no famantaranandro Android Wear natolotra tao amin'ny CES 2018
Vivo dia hanolotra ny finday avo lenta voalohany miaraka amn'ny sensor misy fantsom-pifandraisana ao amin'ny CES anio
BlackBerry hanangana smartphone Android vaovao roa amin'ny taona 2018